Daaweynta dusha sare - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ugu horreyntii, waxaan u baahannahay inaan ogaano sababta ay badeecaddu ugu baahan tahay daaweynta dusha sare, maxay tahay shaqada, iyo dhibaatada ay xalliso.
Ugu horreyntii, habka daaweynta dusha sare ee si dabiici ah loo sameeyo lakab dusha sare ah oo ka mid ah maaddada substrate-ka oo ka duwan farsamooyinka, muuqaalka jirka iyo kiimikada alaab-dhismeedka. Ujeedada daaweynta dusha sare waa in lala kulmo caabbinta daxalka ee badeecada, xirashada caabbinta, qurxinta ama shuruudaha kale ee shaqeynta gaarka ah.
Macaamiil badan ayaa na weydiin doona sababta aan ugu baahan nahay daaweynta dusha sare, maxay tahay shaqada, maxaase ugu wacan in lagu daro howshan?
Shaqaalaha farsamada Ouzhan:Daaweynta dusha sare waa in laga saaro dhammaan noocyada ajaanibta ah (sida saliidda, miridhku, boodhka, filimka ranjiga duugga ah, iwm) ee ku dheggan dusha sare ee shayga, oo la siiyo substrate wanaagsan oo ku habboon shuruudaha dahaadhka si loo hubiyo in filimka dahaadhka wuxuu leeyahay difaac wanaagsan. Waxqabadka daxalka, waxqabadka qurxinta iyo qaar ka mid ah shaqooyinka gaarka ah, dusha sare ee shayga waa in la sii daayo kahor rinjiyeynta. Shaqada ay qabato daaweynta noocan ah waxaa si wada jir ah loogu magacaabaa daaweyn hore (dusha) daaweynta ama (dusha) daaweynta.
Daaweynta dusha sare waxay sare u qaadaa adkeysiga iyo adkeysiga abrasion ee sheyga. Asalka asalka ah, waxay kordhisaa waqtiga isticmaalka waxayna keydineysaa waqti badan, kharash iyo lacag.
Habkani wuxuu adeegsadaa falcelinta koronto si uu u sameeyo daahan dusha sare ee qalabka shaqada. Hababka ugu muhiimsan waa:
Xalka korantada, qalabka shaqadu waa cathode. Nidaamka sameynta daahan dusha sare ee hoos timaada ficilka durdur dibadeed waxaa lagu magacaabaa electroplating. Lakabka dahaadhku wuxuu noqon karaa bir, daawaha, semiconductor ama ay ku jiraan waxyaabo kala duwan oo adag, sida dahaadhida naxaasta iyo dahaadhka nikkel.
Xalka korantada, qalabka shaqada waa anode. Nidaamka sameynta filim oksid ah dusha sare ee ficilka hadda socda waxaa lagu magacaabaa anodization, sida anodization of alloy aluminium.
Daaweynta oksidheynta ee birta waxaa lagu samayn karaa hababka kiimikada ama korontada. Habka kiimikada ayaa ah in la galiyo qaybta shaqada xalka oksijiinta, laguna tiirsanaado ficil kiimiko ah si loo sameeyo filim oksaydh ah dusha sare ee shaqada, sida buluugga birta.
Qaabkani ma laha ficil hadda, wuxuuna adeegsadaa isdhexgalka walxaha kiimikada si uu u sameeyo daahan dusha sare ee qalabka shaqada. Hababka ugu muhiimsan waa:
(1) Daaweynta xuubka badalida kiimikada
Xalka korantada, qalabka biraha malaha wax ficil ah oo hadda socda, walxaha kiimikada ee xalka kujirana waxay la falgalaan qalabka shaqada si ay u sameystaan ​​daahan dushiisa, taas oo loo yaqaan daaweynta kiimikada beddelka kiimikada. Sida bluing, fosfing, passivation, iyo daaweynta cusbada chromium ee dusha biraha.
(2) Dahaadhka koronto la'aanta
Xalka elektaroolka, dusha sare ee qalabka shaqada si dabiici ah ayaa loo daaweeyaa iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelanayn duruufaha dibadda. Xalka, sababtoo ah yaraynta walxaha kiimikada, habka dhigaalka walxaha qaarkood dusha sare ee qeybta shaqada si loo sameeyo daahan waxaa loo yaqaanaa dahaadhka koronto la'aanta, sida nikkel bilaa elektarooniga ah, Korantada naxaasta ee koronto la'aanta, iwm.
QALABKA QALABKA kululaynta
Habkani waa in lagu dhalaaliyo ama heerkul ahaan lagu kala faafiyo waxyaabaha ku jira xaaladaha heerkulka sare si loo sameeyo daahan dusha sare ee goobta shaqada. Hababka ugu muhiimsan waa:
(1) Dareemo kulul
Habka loo gelinayo biraha la shubay si loo sameeyo daahan dusha sare waxaa loo yaqaan 'hot-dip plating,' sida galvanized kulul iyo aluminium kulul.
(2) Ku buufin kuleylka
Nidaamka atomiska birta la shubay oo lagu buufinayo dusha sare ee goobta shaqada si loo sameeyo daahan waxaa loo yaqaan ku xereen kuleylka, sida zinc ku buufinta kuleylka iyo aluminium ku buufinta kuleylka.
(3) Shaabad kulul
Nidaamka kululaynta iyo cadaadinta biraha birta ah si loo daboolo dusha sare ee goobta shaqada si loo sameeyo lakab daahan ah waxaa loo yaqaan shaabbad kulul, sida silsiladda kulul ee aluminium aluminium.
(4) Daaweynta kuleylka kiimikada
Habka ay shaqaaluhu ula xiriiraan walxaha kiimikada iyo kululaynta, iyo qayb gaar ah oo ka soo baxda dusha sare ee qalabka shaqada heerkul sare ayaa loo yaqaan daaweynta kuleylka kiimikada, sida nitriding iyo carburizing
(5) Dusha sare
Marka alxamid la sameeyo, habka loo dhigayo birta la dhigey dusha sare ee qeybta shaqada si loo sameeyo lakab alxamid ah waxaa loo yaqaan 'surfacing', sida alxanka dusha sare ee leh walxaha u adkeysiga u adkeysta.
Habkani waa geedi socod ay maadaduhu uumi-baxayaan ama ionized ku ridayaan oo lagu shubayo dusha sare ee qalabka shaqada hoostiisa si aad u sameysid daahan. Habka ugu weyn waa.
(1) Kaydinta uumiga jirka (PVD)
Xaaladaha faaruqinta, habka uumiga uumiga atamka ama moleekuleyaasha, ama ionizing ku noqoshada ion, ayaa si toos ah loogu xareeyaa dusha sare ee qalabka shaqada si loo sameeyo dabool, kaas oo loo yaqaan dhigaalka uumiga jirka. Xarafka walxaha la dhigto wuxuu ka yimaadaa arrimo aan kiimiko ahayn, sida uumiga xajinta Sputtering, ion plating, iwm.
(2) Gelinta Ion
Nidaamka lagu rakibayo ionyo kala duwan dusha sare ee qalabka shaqada hoostiisa danab sare si wax looga beddelo dusha sare waxaa loo yaqaan 'ion implantation,' sida irbadda boron.
(3) Kaydinta Uumiga Kiimikada (CVD)
Cadaadis hoose (mararka qaarkood cadaadis caadi ah), habka ay walxaha gaasku u sameystaan ​​lakab dhigaal adag oo dusha sare ee goobta shaqada sababo la xiriira fal-gallada kiimikada waxaa loo yaqaan ku-shubista uumiga kiimikada, sida u-dhigidda uumiga ee silicon oksaydhka iyo silsiladda nitride.
QAABOOYINKA KALE EE ISKU QABSAN
Inta badan makaanik, kiimiko, koronto, iyo qaabab jireed. Hababka ugu muhiimsan waa:
Xereynta bilaa camalka ah ama cadayashada ah waa habka loo mariyo rinjiga (dabiiciyan ama mid aan dabiici ahayn) dusha sare ee goobta shaqada si loo sameeyo daahan, loo yaqaan rinjiyeynta, sida rinjiyeynta, rinjiyeynta, iwm.
Nidaamka sameynta lakabka daahan ee dusha sare ee qalabka shaqada oo leh saameyn farsamo waxaa loo yaqaan 'plating saameyn', sida saameynta galvanized.
Daaweynta dusha sare ee laser
Nidaamka lagu shucayo dusha sare ee qalabka shaqada oo leh leys si loo beddelo qaab-dhismeedkiisa waxaa loogu yeeraa daaweynta dusha sare ee laser, sida laser deminta iyo laser reelting.
Tikniyoolajiyadda lagu diyaarinayo filim aad u adag oo dusha sare ka ah goobta shaqada qaababka jireed ama kiimikada waxaa loogu yeeraa tikniyoolajiyad filim adag oo adag. Sida filim dheeman, filimka nitride cubic boron iyo wixii la mid ah.
Sida koronto ahaan, qeybta shaqada waxaa lagu shubayaa rinjiga biyaha lagu shubo ama biyaha lagu shubo, wuxuuna ku sameeyaa wareeg koronto kale rinjiga. Marka la eego ficilka aagga korantada, xalka daahan ayaa loo kala saaray ion cusbi oo la soo oogay, cations-gu wuxuu u wareegayaa cathode, anions-na waxay u guureen anode. Kuwani ion cusbi la soo eedeeyay, oo ay la socdaan qayb ka midabka midab adsorbed, waxaa electrophoresed dusha sare ee workpiece ah si ay u sameeyaan daahan a. Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa electrophoresis.
2. Xereen Electrostatic
Marka la eego ficilka korantada korantada sare ee DC, walxaha rinjiga ee si otomaatig ah loogu soo oogay rinjiga waxaa lagu jiheeyaa inay u duulaan goobta shaqada oo si wanaagsan loogu soo oogay si ay u helaan filim rinji ah, oo loo yaqaan buufin joogto ah.